BFS oo maanta cod gelinaya heshiis Siyaasadeed laga gaaray – Axadle
Labada Gole ee BFS ayaa maanta oo Sabti ah waxa ay kulan wadajir ah ku leeyihiin Magaalada Muqdisho, waxaana la horgeynayaa heshiiska dhexmaray Madaxweyne Farmaajo, Madaxda DG iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Xildhibaannada iyo Senatarada waxaa loo diray fariinta ajendaha kulanka maanta, waxaana la horgeynayaa heshiiska siyaasadeed oo qodobada ugu weyn ay tahay doorashada dalka, nuuca ay noqoneyso, ergada kursiga xildhibaanka dooraneyso iyo meelaha loo cayimay.
Halkii kursi waxaa dooraneysa 101-Ergo oo kasoo jeeda beesha leh kursiga, waa haddii uu ogolaado Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta gacanta ku haya go’aanka ugu dambeeyo ee heshiiskaas.
Ilo xog ogaal ah ayaa Axadle u xaqiijiyay in Madaxweyhnaha DFS iyo Dowlad Goboleedyada si wadajir ah ay u hortagaan labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya fadhigooda maanta, si ay u weydiistaan ansixinta heshiis siyaaasadeedkaas.
Madaxweynaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Madaxweynayaasha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe, Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor, Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta gareen iyo Hir-Shabeelle Maxamed Cabdiwaare, waxaana wehlinaya Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Mas’uuliyiin kala duwan oo katirsan Dowlad Goboleedyada ayaa Axadle u sheegay in hadal jeedin la siinayo Madax Goboleedyada kahor inta aan khudbadda codsiga la siin Madaxweyne Farmaajo si ay wadajir ugu dalbadaan codsiinta heshiiskaan.
Madaxda Dowlad Goboleedyada ayaa maalmihii lasoo dhaafay Caasimadda ku qaabilay Xildhibaannada iyo Senatarada labada Gole, Waa Shacabka iyo Aqalka sare BFS si ay uga xaqiijiyaan labo hadaf oo kala ah codsiinta Ra’iisul wasaaraha oo Arbacadii aqbaliyad ugu codeeyaan Xildhibaanno gaaraya 215-Mudane, iyo taageerista Heshiiska 15-ka qodob ee 17-kii Bishaan Madaxtooyada lagu saxiixay.
Fadhiga labada Gole oo aan wanaagsaneen xiriirkooda ayaa muddo dheer kadib la arkayaa Aqallada Shacabka & Sare oo hal kulan cod ku bixinaya, maadaama labo xarun oo kala duwan ku kala shaqeeyaan.
Madaxweynaha Jabuuti oo QM ka dalbaday taageerista Heshiiska